पूर्व मन्त्री मगरको कार्यकालमा मेलम्चीको प्रगति सबैभन्दा धेरै, कसको पालामा कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
इटालियन कम्पनी सिएमसीले बिचमा काम छोडेपछि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई टेण्डरमार्फत बाँकी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । ठेक्का सम्झौतापछि चिनियाँ कम्पनीले बाँध निर्माण (हेड वक्र्स) लगायतका काम सुरु गर्यो । सुरुङ भित्र पानी हालेर परीक्षण गर्ने क्रममा सुरुङको गेटमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण मेलम्ची आयोजना केही ढिला हुन गयो । तरपनि, मन्त्री मगरको कार्यकालमा मेलम्चीमा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।
२६ वर्षको अवधिमा प्रेमबहादुर सिंहदेखि बिना मगरसम्म २२ जना मन्त्री भए । २२ जना मन्त्रीले २६ वर्षमा ७० प्रतिशत काम गर्दा त्यसबारे खासै चर्चा भएन । तर, मगरको २१ महिने अवधि सम्म आइपुग्दा मेलम्चीको भौतिक प्रगति करिब ९७ प्रतिशत पुग्दा पनि आलोचना हुन छाडेन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री मगरको कार्यकाल मेलम्ची आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेखनीय भएको उल्लेख छ । विभिन्न उपशीर्षक समेटेर तयार पारिएको ६० पेज लामो प्रगति प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको छ । मगरको कार्यकालमा सुरुङ मार्ग निर्माण, सुरुङको ब्रेकथ्रुदेखि सुरुङको फिनिसिङ कार्य, हेडवक्र्स निर्माण, सेन्सरगेट, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन, निर्देशन र समस्या समाधानमा गरिएको सहजीकरण आयोजनाका लागि निकै फलदायी भएको उल्लेख छ ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ मेलम्चीबारे जारी श्वेतपत्र (पूर्णपाठसहित)
आयोजनाको २५ हजार ५१० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सम्पन्न सकिएको थियो । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा सबै गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो । मन्त्री बिना मगरकै कार्यकालमा हेडवक्र्सको कामसमेत मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएको थियो । मन्त्री मगरको कार्यकालमा नै सुरुङको फिनिसिङ लगायतका काम समेत सम्पन्न भए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयहरुबाट पटक पटक हुने गरेको विरोध र समस्याहरुलाई समाधान गर्न मन्त्री मगरले धेरै सहजीकरण गरिन् । निर्माणको काममा आउने गरेको अवरोधलाई हटाउन उनले धेरै मेहनत गरिन् ।
मेलम्ची आयोजना सुरु भएपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी नेता खानेपानी मन्त्री बने । उनीहरुको मूख्य प्राथमिकता नै मेलम्ची आयोजना थियो । तर, डेढ दर्जन मन्त्रीहरुको कार्यकालमा मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति खासै हुन सकेन । खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बिना मगरको पालामा आयोजनाको कामले गति लियो । हाल मेलम्चीको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ । २६ वर्षको अवधिमा प्रेमबहादुर सिंहदेखि बिना मगरसम्म २२ जना मन्त्री भए । २२ जना मन्त्रीले २६ वर्षमा ७० प्रतिशत काम गर्दा त्यसबारे खासै चर्चा भएन । तर, बिना मगरले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै आलोचना भइरह्यो । मन्त्री मगरको २१ महिने अवधि सम्म आइपुग्दा मेलम्चीको भौतिक प्रगति करिब ९७ प्रतिशत पुग्दा पनि आलोचना हुन छाडेन ।
याे पनि पढ्नुस मेलम्चीको पाइप सफा गर्ने क्रममा २ जनाको मृत्यु
मन्त्री मगरले यस अवधिमा खानेपानी ऐन, ढल नीति बनाउनुका साथै ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको काम समेत अघि बढाइन् । आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री मगरले मेलम्ची आयोजनालाई नै मुख्य जिम्मेवारीका रुपमा लिँदै छिटोभन्दा छिटो आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न अग्रसरता देखाइन् । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढाव र फेरबदलले गर्दा मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गर्ने अवसर पूर्वमन्त्री मगरलाई जुटेन ।
मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक) मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो । तर, सिएमसी कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि सन् २०१८ डिसेम्बर २१ मा कम्पनीले काम छोडेर भागेको थियो ।
त्यसपछि सिएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो । ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि मेलम्ची आयोजना विकास समितिले चीनको सिनो हाइड्रोसँग पुनः ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढायो । अहिले मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगतिको काम करिब सम्पन्न हुन लागेको छ भने सुरुङको परीक्षण गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
ट्याग्स: बिना मगर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना